Fiantsenana an-tserasera amin'ny lahy sy vavy | Martech Zone
Fiantsenana an-tserasera ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
Alarobia, Martsa 5, 2014 Alarobia, Martsa 5, 2014 Douglas Karr
Iza no tia ny fiheveran'ny lahy sy ny vavy? Ataoko… ataoko… ny ankamaroany satria izay rehetra miresaka momba ny lehilahy matavy sy nisara-bady tamin'ny faha-40 taonany dia nifanaraka tamin'ny fomba fiainako. Izaho dia mpihaza mahazatra rehefa miresaka fiantsenana… Te hanana, mahazo aho, miala eo aho. Ny fikarohana ataoko dia manomboka aorian'ny fanokafako ilay boaty ary hitako fa nividy zavatra tsy nilaiko, tadiaviko na azoko. Dada tokan-tena aho izay mipetraka miaraka amin'i Katie, zanany vavy 19 taona, izay iray amin'ireo mpiantsena mahatalanjona indrindra hitako. Tsy nandova ny fahazarako mihitsy izy, ka hiteny aho fa ao amin'ny fototarazo.
Ity infographic avy amin'ny Fiheverana ny fandoavam-bola mamoaka azy… ireto misy valiny 6 lehibe tamin'ny fikarohana nataon'izy ireo momba ny fironana fivarotana lehilahy sy vehivavy:
Vehivavy betsaka kokoa noho ny lehilahy no miantsena amin'ny Internet
Ny vehivavy dia mpihaza bargain
Ny vehivavy dia mitady entana vita amin'ny tanany sy raoty
Teknolojia ho an'ny zazalahy sy kiraro ho an'ny zazavavy? Mieritrereta indray
Tian'ireo vehivavy ny fampiharana
Te hampiroborobo ny marikao amin'ny demografika vehivavy anao? Midira amin'ny media sosialy
Mazava ho azy, izany rehetra izany dia manohana ny hevitro fa vehivavy tena mitondra an'izao tontolo izao!
Tags: olonaonline shoppingPinterestreddit Googlevehivavy
Ahoana ny fandaminana ny tranokalanao vaovao